महिला मेयर उम्मेदवारका चुनावी एजेण्डा |
महिला मेयर उम्मेदवारका चुनावी एजेण्डा
प्रकाशित मिति :2017-06-21 15:09:53
डा . तारा सीता हरिमाया
सुनसरी । इटहरी उपमहानगरपालिकामा तीन जना महिला प्रमुख पदका लागि चुनावी मोर्चामा छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले हरिमाया जिमीलाई मेयरको उम्मेदवार वनाएको छ । परिवार दलबाट सीता ढकाल र साझा पार्टीले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा डा. तारा काफ्लेलाई मेयर पदको उम्मेदवार बनाएको छ ।
महिला उम्मेदवारका चुनावी एजेण्डा यस्ता छन् :–
हरीमायाँ जिमीको युद्धकालिन नाम वीरता हो । उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्र केन्द्रीय सम्मेलन आयोजक समिति सदस्य हुनुहुन्छ । २०५५ सालदेखि माओवादीमा आवद्ध हरिमाया २०५९ सालदेखि पूर्णकालिन कार्यकर्ता बन्नुभयो ।
मेयर पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको जिमीको इटहरीलाई भ्रष्टाचारमुक्त सुरक्षित शहर बनाउने योजना छ । आफू निर्वाचित भए इटहरीलाई पूर्वकै व्यापारिक केन्द्र बनाउने गरि काम गर्ने जिमीले योजना सुनाउनुभयो । दखोला तटबन्ध गरि बाढीको समस्या समाधान गर्ने, ढल निकासको व्यवस्था गर्ने जिमीको योजना छ । महिला, जेष्ठनागरिकका सामाजिक सुरक्षाका लागि लागि विशेष व्यवस्था गर्न आफू अग्रसर रहने उहाँले जनाउनुभयो ।
-डा तारा काफले
डा. तारा काफले जनसंख्या र जनस्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर र सामुदायिक चिकित्सामा काशी हिन्दु विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्नुभएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय विराट मेडिकल कलेज टंकीशिनबारी मोरङमा उपप्राध्यापकका रुपमा कार्यरत उहाँको इटहरीमा ढल निकासको वैज्ञानिक समाधान निकाल्न विशेष योजना गरेको दाबी छ । इटहरीमा राजमार्गवाट दुवैतर्फ वाइपास रिङरोड बनाउने उहाँले योजना सुनाउनुभयो । हरेक वडामा मनोरञ्जनात्मक स्विमिङ पूल सहितको पार्क बनाउने, पार्क छेउमा वडा कार्यालय भवन बनाउने, खोलाहरुमा हाइस्टाण्डर्ड तटवन्ध बनाउने, टयाङ्ग्रा खोलाको दुवै किनारामा हरित बँगैचा बनाउने लगायतका योजना डा. काफ्लेको छ ।
सुनसरीको खनार निवासी सीता ढकाल परिवार दलको प्रदेश नम्वर १ कमिटिको कोषाध्यक्ष र सुनसरी जिल्ला कमिटि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । यसैगरि नेपाल महिला परिवारको केन्द्रिय सदस्यका रुपमा पनि कार्य गरिरहनुभएको छ ।
परिवारलाई विखण्डन, छिन्नभिन्न हुन नदिने, आदर्श र संयुक्त परिवार बनाउने उहाँको सपना छ । नैतिक शिक्षाको विद्यालय तहदेखिनै व्यवस्था गर्ने ढकालले योजना बताउनुभयो । बेरोगजारी समस्या समाधान, चक्रपथ निर्माण, मठमन्दिर, मश्चिद, गुम्बा, चर्च, ग्रामथानको स्तरोन्नती लगायतका योजना उहाँले बताउनुभयो । त्यसैगरि, सुकुम्बासी समस्या समाधान, ऐलानी पर्ति जग्ग्गाको संरक्षण लगायतका उहाँको योजना छ ।